Snapdragon 720G, 5020mAh Battery နဲ့ Fast Charging 33W တွေပါတဲ့ Redmi Note9series လာပါပြီ — Anycall Mobile
Snapdragon 720G, 5020mAh Battery နဲ့ Fast Charging 33W တွေပါတဲ့ Redmi Note9series လာပါပြီ
By RKhar M Thant March 24, 20203Mins Read
Redmi ရဲ့ Note series တွေဟာ Price to Perfornance ဖြစ်တာကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ Series ကိုပြောရရင် 8 Series ပါ။ သူ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ 2019 September လမှာ စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ချိုသာတဲ့ဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ကင်မရာနဲ့ လေးစားဖွယ် Performance တွေက Note 8 series အတွက် မှတ်တိုင်တခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမှတ်တိုင်ဟာ နောက်ထပ် ကြာကြာခံတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့… လွန်ခဲ့တဲ့ 12 ရက်နေ့ကပဲ သူ့ကိုအစားထိုးဖို့ Note9series ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တာမို့လို့ပါ။
သင့်အနေနဲ့သိပ်အကြာကြီးစောင့်လိုက်ရမယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကိုယ့် product ကိုကြာကြာမထားပဲ ပြန်ပြန် kill တတ်လို့ပါ။ အခုလည်း သူကိုယ်တိုင် September လကမှထုတ်ထားတဲ့ Note 8 Series ကို ၆ လကျော်ပဲထားပြီး နောက်ထပ်အစားထိုးမယ့် စီးရီးကိုထပ်ထုတ်လိုက်ပြန်ပါပြီ… အဲ့ဒါကတော့ Redmi Note9Series ပါပဲ။
Redmi Note9Series Official Teaser
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် Note Series တွေမှာ Note (number) version တွေပါဝင်လေ့ရှိပြီး Note 7, Note7Pro, Note 8, Note 8 Pro စသဖြင့် ရိုးရိုး ဂဏာန်းစီးရီးရယ် Pro စီးရီးရယ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ Xiaomi က ဘာစိတ်ကူးပေါက်သလဲမသိပါဘူး။ Note9Pro နဲ့ Note9Pro Max ဆိုပြီး နှစ်ခုပဲမိတ်ဆက်သွားပါတယ်။ (Note9Pro ရဲ့ trimmed down version ဖြစ်တဲ့ Note 9S အကြောင်းကိုတော့ နောက်ထပ် Article တစ်ခုသက်သက်နဲ့ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။)
Note9Series မှာပါတဲ့ Note9နဲ့ Note9Pro Max တွေရဲ့တူညီတဲ့ Specifications တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့နှစ်လုံးစလုံးမှာ IPS LCD Display ကိုသာသုံးထားပါတယ်။ 6.67 inches ရှိတဲ့ ScreenSize ကလည်းနှစ်လုံးစလုံးမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Pro Max မို့လို့ ပိုကြီးတယ် ပိုကိတ်တယ်ဆိုတာမျိုး ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ… နောက်ပြီး 2.3 GHz ထိ Clocked လုပ်ထားတဲ့ Snapdragon 720G ကိုဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးမှာသုံးထားတယ်။ Side Mounted Fingerprint ကလဲ varients နှစ်ခုလုံးမှာ ပါဝင်လာမှာပါ။
Redmi Note9Pro (Photo-Internet)
Redmi Note9Pro ဟာ Pro Version လို့နာမည်တပ်ပေမယ့် ရိုးရိုးပုံမှန် ဂဏာန်းစီးရီးကို အစားထိုးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲ။ အကယ်၍ Xiaomi သာ Pro Camera, Max Performance ဆိုပြီးစိတ်ရူးမပေါက်ဘူးဆိုရင် Note9ဆိုပြီးထွက်လာမှာသေချာပါတယ်။
Note9Pro ရဲ့ Display မှာ IPS LCD Display ကိုပဲဆက်လက်သုံးပေးထားပြီး Price to Performance ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားဖို့ LCD Display တွေကို အားထားနေရပုံပေါ်ပါတယ်။ 6.67inches ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ 1080 x 2400 pixels resolution ရှိမယ်။ K30 မှာကတည်းကသုံးလာတဲ့ 20:9 raito ကိုပဲသုံးထားပါတယ်။
Performance ပိုင်းအတွက်ကတော့ Snapdragon 720G ကိုသုံးထားတဲ့ အများသိတဲ့အတိုင်းပဲ G လို့ပါတော့ Gaming အတွက်ကောင်းမယ်။ 2.3 GHz ထိ Clock Speed ရမယ်။ OS ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း iOS ကိုသွားသုံးလို့မရတော့ Android ကိုပဲသုံးထားမယ်။ Android ကိုမှ 10 ကို Customized လုပ်ထားတဲ့ MIUI 11 ကိုသုံးထားတယ်။
ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ Quad Camera Setup ကိုသုံးထားတယ်။ Quad Camera Setup ကိုမှ Mate 20 ရဲ့ဒီဇိုင်းလိုမျိုး လေးထောင့်ပုံစံ Camera Housing ကို အလယ်မှာ သုံးပေးထားတယ်။ Spec တွေအနေနဲ့ 48MP f/1.8 + 8MP f/2.2 + 5MP f/2.4 + 2MP f/2.4 လေးလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Selfie Camera အတွက်က Samsung ရဲ့ Infinity O display လိုမျိုး Punch Hole ထဲမှာ 16MP တစ်လုံး ထည့်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung ရဲ့ Infinity O လောက်မမိုက်ဘူး Punch Hole ကြီးက ကြီးလွန်းတယ်လို့ခံစားမိတယ်။
တခြား Note Series တွေနဲ့မတူပဲ ထူးခြားလာတာကတော့ Side Mounted fingerprint ပါပဲ။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် Note Series တွေရဲ့ Fingerprint Sensor က နောက်ကျောဘက်မှာပဲတပ်ဆင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခု Note9Series မှာတော့ Fingerprint Sensor ကို Side Mounted(ဘေးဘက်) မှာတပ်ဆင်ပေးလာပါတယ်။
Battery အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး သဘောကျမိပါတယ်။ 5020mAh ကြီးမားတဲ့ Battery ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတာက လုံးဝလေးစားဖွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Note9Pro မှာ Fast Charging 18W ပဲပါပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အားသွင်းဖို့ ၂ နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက် စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။
Redmi Note9Pro Max (Photo-Internet)
Note9Pro Max ဟာ အရင် Pro တွေနေရာမှာ အစားထိုးထွက်ရှိလာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရင် မှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Pro Camera, Max Performance လို့ကြေညာထားတဲ့ သူ့မှာ ဘာတွေအထူးအဆန်းပါဝင်လာမလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင် !
Display ပိုင်းမှာတော့ Note9Pro နဲ့အတူတူပါပဲ။ Screen Size ရော, IPS LCD Display ဖြစ်တာရော, Resolution ရော aspect ratio 20:9 ဖြစ်တာရောကွာမသွားပါဘူး။
Performance ပိုင်းမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ Snapdragon 720G ကိုပဲသုံးထားတယ်။ RAM/Internal Storage ကတော့ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ variant အပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်ပေါ့။ Android verison ကလဲ 10 ပဲ MIUI ကလဲ 12 ထိမထွက်လာသေးတော့ 11 ကိုသုံးထားတုန်းပါပဲ။
Camera ပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်း‌လေးကွာသွားမယ်။9Pro မှာ 48MP ပဲသုံးထားရာက9Pro Max မှာ 64MP ပြောင်းသုံးလာတယ်။ Quad Camera Setup လေးလုံးပဲ။ ဒီဇိုင်းကလဲ အတူတူပဲ။ Selfie Shooter က 32MP ပြောင်းသုံးပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဇိုင်းကအတူတူပဲ။ အလယ်ခေါင်တည့်တည့်က Punch Hole ထဲမှာ။ အကြီးကြီးဖြစ်နေတာကလွဲလို့ သဘောကျမိပါတယ်။
Note9Pro လိုပဲ Fingerprint Scanner ကလဲ Side Mounted ပဲ။ အရင်လိုနောက်ကျောမှာရှုပ်မနေတော့ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့အတူ Fingerprint ထည့်တဲ့ လက်ချောင်းကလဲ လက်ညှိုးတို့ လက်ခလယ်တို့ကနေ လက်မကိုပြောင်းသုံးလိုက်ရတယ်။ ဒီလောက်တော့ပေးဆပ်ရမှာပေါ့လေ 🤣
Battery မှာက 5020mAh ဖြစ်ပြီး Capacity ကအတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက အကောင်။ Fast Charging မှာ 33W ဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့ပြောပုံအရဆိုရင် 50% ကိုနာရီဝက်နဲ့သွင်းနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီအချက်မှာတော့9Pro Max ကတော်တော်သာတယ်။9Pro လိုအကြာကြီးတော့သုံးရပြီး အားသွင်းဖို့အကြာကြီးမစောင့်ရတော့ဘူးပေါ့။ (သုံးတော့ပြုံးပြုံး သွင်းတော့မုန်း မဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာ)
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် March လ 12 ရက်မှာကြေညာသွားတဲ့ Redmi ရဲ့ P2P အဖြစ်ဆုံး လူကြိုက်အများဆုံး Note9series အကြောင်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်သိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမြင်မှာရော Note9Series အပေါ်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ကျွန်တော့်လိုပဲ အမြင်တူရဲ့လား ဆိုတာကို အောက်ကကွန်မန့်မှာ မျှဝေရင်း အပြန်အလှန် အာလူးဖုတ်ရအောင်ဗျာ 😉🤗
Phishing သို့မဟုတ် စကားဝှက်တွေကို လိမ်လည်တောင်းခံခြင်း ဆိုတာဘာလဲ??